Isipiliyoni Somkhiqizi | Xiamen Yasin Imboni kanye Trade Co., Ltd.
● Ifektri yethu ayinawo kuphela amandla aqinile wezobuchwepheshe, imishini emihle kakhulu nemishini yokuhlola ngokunemba okuphezulu kepha futhi nokuphathwa kwekilasi lokuqala.
● Njengoba isiqubulo sethu kungukusebenzisa ubuchwepheshe obusha ukwenza ngcono ikhwalithi yemikhiqizo, ukukhulisa izimakethe zethu ngekhwalithi ephezulu nokuqinisa isikweletu sethu ngokuhlinzeka ngemisebenzi emihle, sinesibindi sokwenza izinto ezintsha, sizibophezele ekwenzeni ikhwalithi futhi silangazelela ukwenza okuphuma ku-gelatin.
● Kulezi zinsuku amathani angaphezu kuka-8000 e-gelatin ne-collagen minyaka yonke ayathandwa ezifuyweni futhi angena ezimakethe zomhlaba jikelele. Yonke imikhiqizo ihlangabezana nezinga likazwelonke nezinga lemboni.
Ifektri idinga ulwazi, ukuqinisekisa ikhwalithi engcono kakhulu futhi ihlale ivuselela umugqa wokukhiqiza. Lokho kungenza umphakeli we-gelatin ngokukhipha okungcono kakhulu futhi onge izindleko. Isipiliyoni sethu unjiniyela akhona ukukunikeza i-gelatin engcono kakhulu yohlelo lwakho lokusebenza.
Ukusho ukuthi imikhiqizo yethu ngekhwalithi, kufanele futhi siqiniseke ukuthi inhlanzeko, ukulawulwa kwamagciwane, inqubo yokuphinda isebenze ibilawulwa ngokuqinile. Imikhiqizo yethu inemboni yokudla, indawo yezemithi, imboni yokwengeza kanye nezimonyo njll ezidinga ukunakekelwa okuphezulu ukuqinisekisa ukuthi ayikho inkinga ezosuka kwikhwalithi yemikhiqizo yethu ngokuqhubekayo.
“Ukhetha Kakhulu, Umhlinzeki Wakho Onokwethenjelwa!” sihlala sinikeza imikhiqizo yethu yekhwalithi enhle ezinzile ngentengo yokuncintisana, ukulethwa okusheshayo, insizakalo enhle kakhulu futhi ujabulele ukuthandwa okukhulu phakathi kwamakhasimende.